Home Archives - Page 5 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
Home page or default page
Weerar bumbo oo lala eegtay gaari booliis ah gudaha magaalada Istanbuul ayaa waxaa ku dhimatay ugu yaraan 11 qof, oo ay ku jiraan saddex katirsan ciidamada booliiska, sida uu sheegay guddoomiyaha magaalada. “Todobo booliis ah […]
Ankara-(Puntland Mirror) Sida ay sheegeen Qoyska Marxuum Maxamed Cali Kalaay oo Maalinta Jimcaha aas ballaaran loogu sameynaayo dalka Mareykanka Madaxweynaha dalka Turkiga Reccep Tayyip Erdogan iyo Boqorka Jordan Boqor Cabdallah ayaa ka qaybgeli doona Aaska. […]
Washington-(Puntland Mirror) Hillary Clinton ayaa la sheegayaa inay heshay tirada ergada laga rabay si ay u noqoto musharaxa xisbiga dimuquraadiga ee Madaxweyaha Maraykanka. Mrs Clinton ayaa hadda noqoneysa musharaxa doorashada November dhici doonta uga qeybgalaya […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta duhurkii gaaray xerada qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kiinya halkaas oo ay ku noolyihiin qaxooti badan oo Soomaali ah. Waxaa madaxweynaha halkaas kusoo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaarada cadaalada Puntland ayaa sheegtay in berito ay tahay Ramadaan, sida uu sheegay wasiirka cadaalada. Wasiirka cadaalada dowlada Puntland Saalax Xabiib oo caawa la hadlay taleefishinka dowlada Puntland ayaa sheegay in bisha laga […]
Gabar wariye ah oo lagu dilay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Gabar wariye ahayd oo ka shaqayn jirtay idaacada dowlada Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaala Muqdisho. Sagal Salaad Cismaan ayaa koox hubaysan ku toogteen kasoo horjeedka Jaamacada Plasma oo ay wax kabaran jirtay. […]
Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Urur-Goboleedka IGAD, Midowga Yurub, Ethiopia, Italy, Sweden, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska iyo Dowladda Maraykanka ayaa soo dhoweeyay horumarka muhiimka ah ee Madasha Hogaanka Qaran (MHQ) usbuucan ka gaartay hanaanka geedi-socodka doorasho ee […]
June 3, 2016 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Turkiga a ayaa si wadajir ah xarigga uga jaray dhisamaha cusub ee Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya. Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Da’uud Aweys oo ku sugan Xafladda furitaanka Safaaradda Cusub ee Turkiga […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Turkiga Rajib Dayib Erdogan ayaa goor dhoweyd maanta oo Jimce ah soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waxaa garoonka Aadan Cade kusoo dhaweeyay […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirkii Beeraha iyo Waraabka Puntland Cabdinuur Cilmi Maxamuud oo loo yaqiin “Biindhe” ayaa saakay oo Jimce ah ku geeriyooday magaalada Muqdisho, halkaas oo uu daaweyn xanuun aan la sheegin u joogay, sida ay [...]
A suicide bomber blew himself up in a military camp in the Somali town of Galkayo on Saturday, killing four officers, officials said, an attack claimed by the al Qaeda-linked al Shabaab group. The dead [...]